नेकपा संकट : नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन सक्रिय भएकै हो ? (भिडियो) – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/नेकपा संकट : नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन सक्रिय भएकै हो ? (भिडियो)
नेकपा संकट : नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन सक्रिय भएकै हो ? (भिडियो)
काठमाडौं, २२ असार । नेपालमा भएका परिवर्तन र राजनीतिक संकटमा वाह्य हस्तक्षेप बढ्ने गरेको चर्चा हुने गर्दै आएको छ । दक्षिणी छिमेकी भारत यो मामिलामा बढी नै सक्रिय हुने गरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले बताउँने गरेका छन् ।
शान्त कुटनीतिक अभ्यास गर्दै आएको मानिने उत्तरी छिमेकी चीन पछिल्ला दिनहरुमा सक्रिय बन्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादमा चिनियाँ पक्ष सक्रिय बनेकै हो त ?
सोमबार चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त बनेको चर्चा चल्यो । नेकपामा बढ्दो विवादकाबीच राजदूत यान्छीले आइतबार सो दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई उनकै निवासमा भेटिन ।
यो सक्रियतालाई परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा विश्लेषकहरुले नेपाली राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेपका रुपमा पनि अथ्र्याएका छन् । यान्छीको भेटवार्ता यो पहिलो होइन, गत बैशाखमा नेकपाभित्र बढेको विवादकाबीच पनि उनले नेकपा नेताहरुसँगको भेटलाई तीव्रता दिएकी थिइन ।
त्यसबेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपालसँग उनको भेटवार्ता भएको थियो । संयोग हो वा भेटवार्ताकै प्रभाव त्यसबेला नेकपा विवाद साम्य भएको थियो । अहिलेको सक्रियतालाई पनि नेकपा विवाद मिलाउने ध्ययेका रुपमा हेरिन थालेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री कमल थापा चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई बाह्य हस्तक्षेपका रुपमा व्याख्या गर्छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि आफ्नो सरकार ढाल्न भारतीय राजदूत सक्रिय बनेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई प्रसंग बनाएर चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेकोतर्फ प्र्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले जस्तै अन्य कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले पनि सत्तारुढ नेकपाबीच बढ्दो मतभेदका बीचमा चिनियाँ राजदूतको नेकपा नेताहरुसँगको सक्रिय राजनीतिक भेटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार मधुरमण आचार्यले पनि आफू मिल्नुभन्दा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको प्रसंग उठाएका छन् । अझ उनले व्यंग्यात्मक ट्वीट गर्दै चिनियाँ हस्तक्षेप बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर, नेकपा नेताहरु भने पार्टी जुटाउन चिनियाँ सक्रियता बढेको स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरु माधव नेपाल नेकपा विदेश विभाग प्रमुख भएकाले राजदूतहरुसँगको भेटलाई दुई देशको कुटनीतिक भेटवार्ताकै रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्तरिक राजनीतिक गतिशीलता र घटनामा विदेशी शक्तिको चलखेल भन्ने विषयलाई खण्डन गरेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । नेपाल आफैं निर्णय गर्न सक्षम रहेको उनको तर्क छ ।
नेकपा–चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । २०७६ असोजमा काठमाडौंमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु छलफलमा जुटे ।
उनीहरुले दुई पार्टीबीच भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । उक्त समझदारीमा पाँच बुँदा समेटिएका थिए । २०७७ वैशाख नेकपाको विदेश विभाग र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागबीच कोभिड–१९ मा केन्द्रित रहेर दुई घण्टा भर्चुअल अन्तरक्रिया भयो ।
२०७७ असार ५ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी(सिपीसी) का नेताहरुबीच देश र पार्टी सञ्चालनबारे भर्चुअल संवाद भयो ।
त्यस्तै नेकपाको स्कूल विभाग र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको संयुक्त रूपमा आयोजनामा भएको कन्फरेन्समा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित झण्डै सय जना नेताहरु सहभागी भए भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपीसी)का तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाओ र उपप्रमुख ग्वाओ लगायतका नेता सहभागी बने ।
भारतले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप हुने गरेको आलोचना हुँदै आएकोमा अहिले चीनको सक्रियतालाई पनि त्यही नजरले हेर्न थालिएको छ ।